Ụbọchị My Pet » Top Atụmatụ maka a Great Kiss Kedu Ele nnọọ zuru okè
emelitere ikpeazụ: Jan. 17 2021 | 2 min agụ
Isusu ọnụ na-kemgwucha akụkụ dị mkpa nke ọ bụla banye ná mmekọrịta ịhụnanya. Ebe ọ bụ na n'oge ochie ọtụtụ mmekọrịta ọkachamara na-ekwu banyere mkpa nke kissing na ugbu a Nchoputa si a nnyocha na-egosi na ugboro nke kissing bụ kpọmkwem proportional na kwuru larịị nke afọ ojuju na a mmekọrịta.
N'oge kwuru nnyocha ọ hụrụ na 66% ndị inyom na 59% nke ndị ikom ha ná njedebe mmekọrịta dị n'ihi na nwunye ha na-adịghị mma na kissing. Nke a na-egosi otú merụsịrị otu kwesịrị ịmụta nkà nke isusu ọnụ na-eme ka ya / mmekọrịta ya a na-anọ ogologo oge otu. N'okpuru bụ ụfọdụ ihe bara uru Atụmatụ maka oké nsusu.
– Gbalịa izere isusu ọnụ na ọha na eze. Ee, i nwere ike maa aga maka ngwa ngwa pecks n'ihu ọha, ma ọ bụ mgbe ihe amamihe izere ịbụ kwa omiiko ke oghe. Omiiko nsutu kwesịrị chọọ gị onwe oge na otú ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-indulge ha n'azụ mechiri emechi ụzọ ma ọ bụ mgbe e nwere ihe ọ dịghị onye na-ahụ gị. Isusu ọnụ na nzuzo kwe ma mmekọ na-na ha omiiko kasị mma, nke bụ isi mgwa nke oké nsusu.
– Ndị mmadụ na-aka ndọrọ mmekọahụ mmekọrịta mgbe na-esiri ike ịghọta ihe kpọmkwem na ha kwesịrị na-eme ha ezé mgbe isusu ọnụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike adịghị jikwaa ezé gị mgbe isusu ọnụ, ị bụ maa a ọjọọ kisser. Nsogbu yiri ka mara mma dị mfe, ma n'ezie ọ bụ oké ike iji merie ya.
– Iji jide n'aka na ezé gị adịghị ga-emerụ onye gị na ma ọ bụ kwụsị ịbụ omiiko ezu mgbe isusu ọnụ, ị ga-adị ka nwayọọ dị ka o kwere mgbe ọ na-amakụ onye gị ji egbugbere ọnụ n'etiti ezé gị. Mgbe ahụ, ji nwayọọ nwayọọ na sere ha (na egbugbere ọnụ nke onye gị na) azu azu ma kwe ka ha slide were were site ezé gị. Act adịghị kwa ike, ihe siri ike na-na-anọ na nche n'ekweghị onye gị aka ịghọta na i maara banyere ọnọdụ nke ezé gị.
– Great kissers mgbe na-ahọrọ ime ka anya na kọntaktị na ha na onye òtù ọlụlụ mgbe isusu ọnụ. Ee, e nwere mgbe ụfọdụ kissers mechie anya ha na-eche oge, ma na-eme ma ọ bụrụ na ọ bụ a zuru okè nsusu. Iji mee ka nsusu zuru okè, ị kwesịrị ị na-emechi anya gị ka anya dị ka egbugbere ọnụ gị na-ezute na nke onye gị na. Anya; ka ahuhu eruba n'anya gị ka gị na onye òtù ọlụlụ na-; nke ahụ bụ uzommeputa a zuru okè nsusu.
– A oké kisser mgbe na-enye ohere ahụmahụ nke isusu ọnụ na-na-agwụ ike maka ya / ya onye. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ezigbo kisser ị ga-ahụ ụzọ iji hụ na omume nke kissing adịghị aghọ-agwụ ike n'ihi na gị na onye òtù ọlụlụ. Otu ụzọ nke na-eme isusu ọnụ ọzọ na-akpali akpali bụ site metụtara gị dum n'ime omume. Mmetuaka kasị erogenous akụkụ nke onye gị n'ahụ iji aka gị ma jiri nwayọọ aka ya / isi ya, ihu na olu. Gị na onye òtù ọlụlụ ga-amalite na-anụ ụtọ oge ọzọ.
Iji mee ka a nsusu, a oké nsusu, ị ga-eme ihe ndị na-onye gị na. The ọrụ bụghị mgbe nile siri ike; ọ dị nnọọ mkpa nri ebumnobi na nzube a otutu ahuhu
Online dịwara Kparịtara isiokwu 100% Ịga nke Ọma
5 Ihe Celebrities Pụrụ Ịkụziri Anyị Banyere Mmekọrịta